Hafatra Krismasy araka ny Lioka 2.7 – Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
« Ary niteraka ny Lahimatoany izy dia nohodidininy lamban-jaza ka nampandriany teo amin’ny fihinanam-bilona, fa tsy nisy nitoerany tao an-tranom-bahiny »
Krismasy 2016, maro ny hafatra azo tsoahina ao anatin’ny texte izay anjarantsika isa-taona isaky ny Krismasy (Lioka 2:1-14), anankiray amin’izany izay ambaran’ity Lioka 2:7 ity. Malaza ny fametrahan’i Lioka ao amin’ny Filazantsara izay nosoratany, araka ny fahazoantsika azy hatramin’izao, fa tao an-tranon’omby no toerana nahaterahan’i Jesosy ary marik’izany ny fihinanam-bilona izay nampandrian’ny ray aman-dreniny Azy raha vao teraka Izy. Ity andinin-tSoratra Masina ity koa no niaingan’ny hevitry ny maro ny naha tao anjorombalan’ny Bethlehema ilay fianakaviana Masina tamin’izany vanim-potoana nahatongavan’ny Mesia teto amin’izao tontolo izao izany. Lazaina fa mariky ny fandavana sy tsy fandraisan’izao tontolo izao Azy sahady izany.
Mety ho marina ihany izany rehetra izany, kanefa andeha ny Filazantsara ho antsika sahady avy amin’izany andinin-tSoratra Masina izany (Lioka 2:7) no havoitrantsika amin’izao toriteny izao.
Tranom-bahiny (hotel, guest house) no nandikan’ny Baiboly malagasy ny teny fototra hoe Kataluma. Araka izany fandikana izany dia heverin’ny maro fa tamin’ny fotoana nahatongavany tao Bethlehema dia efa tsy nahita hotely hivantanana intsony ity fianakaviana masina ity satria efa feno daholo izany. Bethlehema anefa dia tanana kely ihany tamin’izany fotoana izany ka tsy azo heverina fa ho efa nisy hotely. Ny teny Grika Kataluma izay nadika hoe « trano fandraisam-bahiny » koa dia tsy izany (hotely) no dikany fa EFITRANO AMBONY RIHANA FANDRAISAM-BAHINY (guest room). Araka ny Lioka 22:11 dia ity efitra ity no nanaovan’i Jesosy ny Fanasany (ny Fanasan’ny Tompo) mialohan’ny hijaliany sy hahafatesany. Azo heverina fa fananan’ny fianakaviam-ben-dry Josefa ity trano izay nivantanany ity: Tananan’ny Davida Razambeny rahateo Bethlehema (Mat 1-2). Noho ny fanisam-bahoaka nanerana ny Fanjakana dia betsaka ny vahiny tonga tao Bethlehema ka nameno ny Katalumai rehetra. Vokatr’izany, tahaka ireo tompon-trano mpandray vahiny rehetra, dia tsy nampaninona ity fianakaviana masina ity ny natory tao ambany rihana (fa tsy hoe tsy fidiny ho azy). Manaraka izany, ity efitra ambany rihana ity dia tsy valam-biby loatra araka ny fiheveran’ny maro azy (ny valam-biby dia vatolampy nolavahana na rindrim-bato avo teny ivelan’ny trano, cf. Jaona 10:1-10) fa efi-trano nampiasaina tamin’izay nilaina azy rehetra andavan’andro izy ity: tamin’ny atoandro dia natao ho efitrano fiasana fa tamin’ny alina kosa dia nampiasaina hatorian’ny biby kanosa na malemy ny tao, raha toa ka navela tany anaty vala kosa ny biby matanjaka rehetra. Noho izany koa no nahitana fisotroan-drano sy fihinanam-bilona tao izay nampandrian’i Josefa sy Maria an’i Jesosy zaza rehefa teraka.
Izany hoe tsy tany anaty valam-biby na tranon’omby araka izay rentsika hatrizay (étable) izany no teraka Jesosy fa tao amin’ny efitrano ambany rihana izay voatokana ho an’ny tompon-trano satria natokana ho fandraisam-bahiny sady efa feno rahateo ny efitrano ambony rihana na ny Kataluma.
Inona no Filazantsara ho antsika amin’izany? Fananan’ity fianakaviana masina ity trano izay nivantanany ity (fananan’ny fianakaviambeny). Tsy vahiny tokony ho raisina Jesosy fa isan’ny Mpandray vahiny kosa, izany hoe, tamin’ny vanim-potoana nahaterahany, nahatongavany teto amin’izao tontolo izao, dia efa nandray an’izao tontolo izao ho ao an-tokantranony Izy = nanaja an’izao tontolo izao. Marihina fa nanana ny lanjany teo amin’ny tontolo Palestina tamin’izany fotoana izany ny fandraisam-bahiny (hospitality). Nampirisika ny Kristiana tamin’izany ry Paoly sns… Manaraka izany, mialohan’ny hahafatesany sy hitsanganany tamin’ny maty dia io efitrano Kataluma io koa no nanaovany ny Fanasany. Tsy efitrano fialan-tsasatra ihany izany ny Kataluma fa efitrano fisakafoanana ihany koa = Efitranon’ny fiainana sy fiadanana. Ary satria vahiny sy mpivahiny avy isika eto amin’izao tontolo izao (cf. Efes 2:11-12) dia efa taratry ny ho fandraisany antsika ho ao an-dapany rahatrizay izany rehetra izany (cf. Efes 2:19-22): taratry ny ho fandraisany rahatrizay antsika koa ao amin’ilay Kataluma-n’ny lanitra izay hialantsika sasatra sy hisitrahantsika ny sakafon’ny lanitra mandrakizay. Raha ny tena marina dia tsy ho vahiny ho raisina intsony isika amin’izay fotoana izay fa ho tompon-trano tahaka Azy, manan-jo handova mandrakizay ny haren’ny lanitra ao amin’izany Lapany izany. Hoy ny Epistily ho an’ny Efesiana, 2:19 « Koa dia tsy vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tampon-tany, mpiray fanjakana amin’ny olona masina ». Noho ny asam-pamoronana vaovao sy ny fampihavanana nataon’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy teo amin’ny hazofijaliana no hananantsika izany identity izany.
Isaorana Andriamanitra ry havana noho izay nataony rehetra ho antsika tao amin’i Jesosy Kristy sy tamin’ny alalany ka na dia ny toerana nahaterahany aza dia efa mitory amintsika sahady ny fitiavany lehibe sy izay kendren’ny asany ho antsika dia ilay fiainana sy fiadanana mandrakizay.
Ho Azy irery anie ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen!
(Nosoratan’i Raiamandreny Pst.Dr. Rafalimanana Jean De Dieu, Mpampianatra Testamenta Vaovao ao @ Sekoly Ambony Loterana momba ny Teolojia na SALT)